सिके राउतलाई सांसद बनाउन यस्तो चलखेल ,सांसद डा. यादवको राजीनामाको रहस्य खुल्यो - USNEPALNEWS.COM
विखण्डनवादी राजनीति छाडेर मूलधारमा आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतलाई संघीय संसद्मा ल्याउन पहल सुरु भएको छ ।
राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
यि सामान नेपालबाट बाहिर पठाउन मिल्दैन,५ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यमा यस्तो व्यबस्था